Weerar Madaafiic ah oo lagu qaaday Saldhig ay leeyihiin Ciidanka Dowladda | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Weerar Madaafiic ah oo lagu qaaday Saldhig ay leeyihiin Ciidanka Dowladda
Weerar Madaafiic ah oo lagu qaaday Saldhig ay leeyihiin Ciidanka Dowladda
Saldhig Ciidanka Xoogga dalka ay ku leeyihiin Magaalada Garbahaarey ee Xarunta Gobolka Gedo ayaa waxaa xalay lagu qaaday weerar loo adeegsaday Madaafiic, kuwaasi oo jugtooda laga maqlayay gudaha Magaalada.
Xubno hubeysan oo la rumeysan inay ka tirsan yihiin Al-shabaab ayaa la sheegay in weerarkaas ay ku qaadeen Saldhiga Ciidanka Xoogga ee Garbahaarey, iyadoo dhowr madfac la xusay in lagu tuuray halkaas, ayna qaarkood ku dhaceen gudaha Saldhiga.
Dad ku sugan Garbahaareey ayaa soo sheegaya in xalay ay maqlayeen dhawaqa Jug Culus, isla markaana ay xigtay rasaas xoogan iyo Madaafiic kale oo Ciidanka ay uga Jawaabayeen Madaafiicdii lagu soo tuuray.
Al-shabaab ayaa dhowr jeer weeraro isugu jiray Madaafiic iyo mid toos ahaa ku qaaday Saldhigyo Ciidamada dowladda Federaalka iyo kuwa AMISOM ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan Gobolada dalka, waxaana weerarada qaarkood ka dhashay Khasaarooyin kala duwan
Maqaal horeDowladda Soomaaliya oo xabsi cusub ka hir-gelineysa Galmudug
Maqaal XigaSomaliland oo War kasoo saartay Isbedelka ku yimid xiriirkii Beesha Caalamka
R/Wasaare Rooble iyo Mucaaradka oo kulan ku yeelanaya Muqdisho.
Howlgal dad lagu qabqabtay oo laga sameeyay Dhuusamareeb
Maamulka Bacaadweyne oo sheegay in Al-Shabaab ay go’doomiyeen deegaankaasi